Kwenziwe ngentando sauce sauce wholes ...
Kwenziwe ngentando ikati isikhwama utshani ca ...
Ungayisebenzisa kanjani ifilimu roll pac yami ...
Ilungele ukuthumela bonke osayizi ...
Kwenziwe ngentando sukuma reseala ...
Isikhwama se-cannabis sokumelana nengane ngokwezifiso
Isikhwama sokumelana nengane yesilayida sibukeka sisihle kakhulu, futhi sinobuciko. Ukuze nje sithole lesi sikhwama se-slider uziphu, sidinga uku-oda uziphu okhethekile, futhi futhi sidinga ukufaka isilayida esikhwameni ngesandla. Lokho kuzodinga isikhathi nemali eningi. Kepha kukufanele impela lokho.
Ilungele ukuthumela wonke amasayizi esikhwama se-cannabis
Senza ikakhulu umsebenzi we-OEM, okusho ukuthi sizokhiqiza izikhwama ngokuya ngohlobo lwesikhwama sakho esidingekayo, usayizi, impahla, ubukhulu, ukuphrinta nobungako. Ngenkathi manje kunezidingo ezinkulu zokulungela ukuthumela izikhwama, bese sihlangana nemakethe, futhi sizama konke okusemandleni ukukwenzela imiklamo nekhwalithi enhle kakhulu.
Isikhwama se-slid esikhishwe ngokwezifiso sengane esenziwe ngokwezifiso
Senze amasayizi amaningi wezikhonkwane, ezinye ziyizikhwama ezincane, abantu bazofaka imikhiqizo yabo ngqo kuso. Ngenkathi amanye amakhasimende ethanda ukwenza isikhwama esikhudlwana sokuncinza, njenge-9 `` X12 '', njengesikhwama sokuthenga. Bazofaka isikhwama esitolo, uma sekukhona umthengi othatha izikhwama ezincane ezihlukile, bazofaka zonke izikhwama ezincane kulesi sikhwama esikhulu sokuthenga, bese bevala uphawu njengoba uhulumeni efuna.
Isikhwama se-cannabis sokumelana nengane kabili
Uziphu ophindwe kabili uhlobo lukaziphu okhethekile ongavikela izingane kumkhiqizo ongaphakathi ezikhwameni, kukhona ukuvulwa okungamanga ngemuva kwezikhwama, uma ufuna ukuvula izikhwama, idinga ukuthi udonse ungqimba wangaphambili nongqimba lwangemuva ngasikhathi sinye , kungenjalo ayikwazi ukuvulwa.Ithandwa kakhulu emasakeni e-cannabis.
Isikhwama se-cannabis esikhwamayo esenziwe ngokwezifiso
Isikhwama se-zip up yilona hlobo lwesikhwama olusetshenziswa kakhulu ukupakisha insangu, akunandaba ngezimbali ezomisiwe noma ikhofi, ushukela, amakhukhi afaka ne-CBD noma i-THC. Iningi lamakhasimende lithanda indawo ecwebezelayo ngefasitela, futhi manje ukuphrinta kwe-UV kungumkhuba omusha.
Isikhwama esikhwameni se-wholesale se-cannabis
Nge-cannabis, njengezimbali ezomisiwe, imvamisa abantu bazokhetha izikhwama zokuma cos idinga isikhala esikhulu. Ngenkathi amanye amaphilisi, izikhwama ezincane ze-sachet kuzoba ukukhetha okungcono. Singenza isikhwama esincane kunazo zonke esingu-4 * 5cm, kanti ubukhulu obujwayelekile bungu-5 * 12cm, njengesikhwama seCarttel ngezansi. Futhi nezikhwama ezincane ze-cannabis, ungenza i-matt, ecwebezelayo noma i-UV, nge-foil noma ngaphandle, ngewindi, uziphu, njll.